non-ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသော setting ကို အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > non-ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသော setting ကို အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
non-ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသော setting ကို အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
AOX-မေး စီးရီး Non-ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသော setting ကို အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuaသို့r ဖြစ် အသုံးချ သို့ အဆိုပါ လြှောကျလှာ လိုအပ် အချိုးကျ ထိန်းချုပ်မှု, နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် သို့rque နှင့် အကွာအဝေး ၏ 50N.m ~ 6000N.m.Drived အားဖြင့် 380V / 220V / 110VAC သို့မဟုတ် 24V / 110VDC ပါဝါ, သွင်းအားစု 4-20mA သို့မဟုတ် 0-10VDC ထိန်းချုပ်မှု signal ကို, ရွေ့လျား အခင်အရှင် သို့ အဆိုပါ မှန်သော အနေအထား, နှင့် အောင်မြင်မှု သို့ auသို့matic ထိန်းချုပ်မှု, အဆိုပါ အများဆုံး output ကို သို့rque ဖြစ် 5000Nm.We များမှာ ကတိသစ္စာပြု သို့ ပေး ကျွန်တော်တို့၏ dဖြစ်tribuသို့rs နှင့် cusသို့mers နှင့် အဆိုပါ အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှု။
7.5 ကီလို ~ 83 ကီလိုWeightï¼
AOX-မေးစီးရီး Non-ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသော setting ကိုအစိတ်အပိုင်းအတွက်ရရှိနိုင်ဗို့အား၏ 1. Wide အကွာအဝေးလျှပ်စစ် actuator turn
နွေဦးပေါက်တို့ကထော 2. Indicator
3. က Non-ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသော setting များကို: AOX-မေးစီးရီး Non-ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသော setting ကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလျှပ်စစ် actuator settings ကိုနှင့်အမှားလှည့်အပေါငျးတို့သအလုံပိတ် display ကိုပြတင်းပေါက်မှတဆင့်အနီအောက်ရောင်ခြည်အလင်းကိုအသုံးပြုပြီး, အဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုနှင့်သံလိုက်ဘူးသီးပြုနေကြသည်။ အဆိုပါ actuator အားလုံး setting များကိုနှင့်အမှား site ပေါ်တွင်လျှပ်စစ်အဖုံးဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပြည်တွင်းရေးထိန်းချုပ်မှု circuit ကိုဖော်ထုတ်မပါဘဲဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါဆိုသည်အကြောင်းနှင့်ပြတင်းပေါက်များအကြားထိရောက်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများအကွာအဝေး 1-1.5 မီတာဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းတွင်တီထွင်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုလေးစားအပေါ်ထားရှိတန်ဖိုးနှင့်အတူ, AOX ၏ R & D အဖွဲ့သည်လုံးဝ 96 အမျိုးသားရေးမူပိုင်ခွင့်ရရှိထားခဲ့ပါသည်။ ဒီစက်မှုလုပ်ငန်း၏ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေအထားကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့။ ကျနော်တို့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုအာရုံစိုက်ဖို့ဆက်လက်မြင့်မားဆုံးအရည်အသွေးမြင့်စံချိန်စံညွှန်းများအကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်မား AOX-မေးစီးရီး Non-ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသော setting ကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။
A: ပုံမှန် AOX-မေးစီးရီး Non-ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသော setting ကိုစိတျအပိုငျးကအထူးကအကြောင်း 3-5 ရက်အတွင်းကြာစိတ်ကြိုက်လျှင်ငါတို့ရှိသမျှသည်, စတော့ရှယ်ယာရှိလျှပ်စစ် actuator လှည့်။
မေး: AOX-မေးစီးရီး Non-ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသော setting ကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလျှပ်စစ် actuator လှည့်အဘို့အသင်သည်မည်သည့်လျှော့စျေးပေးပါသလား
A: ဧကန်အမှန်အသင်သည်တစ်ချိန်တည်းမှာအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းနှင့်ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုအားဖြင့်သူတို့အား get ကူညီရန်အကြှနျုပျ၏အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
hot Tags:: non-ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသော setting ကို အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်